Top 5 zvikanganiso mu Shamwari iwe pamwe wakarasikirwa - Pop-Tsika
Top 5 zvikanganiso mu Shamwari iwe pamwe wakarasikirwa
'Shamwari' inoratidzira kwazvo NBC show ine yakakura fan yepasi rose inotevera. Vaya vane hanya nehuratidziro vanodurura pamusoro pezvinhu zvese uye kazhinji vanonamatidzwa nenyaya yenyaya. Ipo iyo showa iine yakawanda nguva yekufananidzira iyo yave pop pop tsika kanoni, zvimwe zvinokanganisa zvikanganiso zvakaoma kupotsa.
Shamwari: Reunion yakagadzirira kuburitswa papuratifomu svondo rino. Asati aenda kubhawa-yekutarisa chikamu chemwaka wese gumi kubva pakuratidzira, vaverengi vanofanirwa kuwana imwe nzwisiso mumabloopers uye zvikanganiso mukuenderera. Vamwe vanozviti 'Shamwari' vanonyanyisa vanogona kunge vasina kuziva izvi.
# 1 - Iko Kunonyangarika kunyora (Shamwari mwaka 4 chikamu 20)
Zvakadaro zvaRoss mufurati raJoey kubva 'Shamwari' mwaka 4 episode 20
Iyo episode 'Uyo Ane Vese Mapfekero Emuchato' yakanangana nekufamba kwaMonica, Rachel, naFebe kuenda kunotenga kumuchato waRoss naEmily. Asi zvinhu zvinotora shanduko pavanosarudza kuyedza zvipfeko zvemuchato futi.
Iko kukanganisa mumwaka wechina episode 20 kunoitika apo Ross anoenda kuimba yaChandler naJoey.
maitiro ekutangazve kuvimba muhukama mushure mekunyepa
Magna doodle akaisa pamadziro kuyambuka firiji yavo shanduko mushure mekupfura. Meseji yacho yakatwasuka uye inonakidza kuverenga. Mumwe anogona kungoshamisika kana iko kunyora kwekunyora kuchiratidza pfungwa dzechokwadi dzaChandler naJoey.
Uyezve verenga: Maitiro ekuona Shamwari Reunion muUAE
unoziva sei kana musikana achikuda
# 2 - Zvakaipa zvaMonica, zvitsitsinho zvinorwadza zvadzoka mumba make?
Ndiani asingazorangarira bhutsu dzakakwirira dzaMonica? Dhiyabhorosi akaunza mapampu anonetsa mumwaka 8. Asi mushure memaawa ekufamba muNew York, Monica akazobvuma kuti kutenga kwake kwekukasira kwakamupa tsoka dzekubuda ropa.
Neraki, Chandler piggy-anotsigira imba yake. Asi Monica akazoona bhutsu dzake dzakakwirira-chitsitsinho dzakasiiwa panguva yekumira kwake. Kunyangwe vaoni vazhinji vaifunga kuti ndiko kwaive kwekupedzisira kuona kune bhutsu dzaMonica, zvakadzoka zvisinganzwisisike mumba make. Uyezve, zvitsitsinho zvaive zvisisiri kukuvadza tsoka dzake zvekare.
Vaverengi vanosara kududziro yavo yechiitiko ichi. Pamwe, Monica akazopedzisira awana bhutsu nyowani muNYC, iyo yainge isina iye achikumbira kunzwirwa tsitsi.
Uyezve verenga: 'Shamwari' vateveri havafarire nezvaJames Corden kuitisa musangano wekubatanazve wakasarudzika mushure mekuburitswa kwetrailer zviri pamutemo
# 3 - Chandler naRachel vakasangana katatu ... kekutanga?
Chero munhu anonyanyisa anorangarira apo Chandler akatanga kusangana naRachel. Mwaka 1, Chikamu 1, Monica akaunza shamwari yake yepamoyo kuchikwata chose mushure mekutiza muchato. Chiitiko ichi chakasimbiswa sekubatana kwekutanga kwaChandler naRachel, asi zvimwe zviitiko zviviri kubva pachiratidziro zvakaratidza mhedzisiro yakafanana.
Mumwaka wechitatu, chikamu 6, chakanzi 'Uyo ane Flashback,' Chandler naRachel vanosangana kekutanga, sezvakakurudzirwa nekubatana kwavo.
Mumwaka wechishanu, chikamu chechisere, 'Mumwe ane Zvese Zvekutenda,' kuteedzana kwekudzoka shure kubva kumazuva ekuchikoro chesekondari kwaMonica kunoratidza kukoreji-kuenda Chandler kusangana naRachel kekutanga.
# 4 - Chandler akareurura rudo rwake kuna Monica ... kaviri!
Chandler anoreurura rudo rwake kuna Monica inguva yekukoshesa mu 'Shamwari.' Asi ndirini chaizvo paakamuratidza manzwiro ake pamusoro pake?
'Iye Uko Kunowanikwa Munhu Wese' inoratidza Chandler achizivisa rudo rwake kuna Monica. Panguva Rachel, Joey, uye Phoebe vakaedza kumisikidza vaviri ava, vakareurura kuti vaitove kudanana.
maitiro ekuti mazuva afambe nekukurumidza
Kududzira Chandler achiratidza rudo rwake kuna Monica,
Ndiri kudanana naMonica. Hongu, ndinomuda. Ndinomuda. Ndinokuda, Monica.
Kunyangwe akashamisika uye asingatauri kwenguva pfupi, Monica anoti inguva yekutanga Chandler kutaura 'L-izwi.'
Nekudaro, mu 'Shamwari,' mwaka wechishanu chikamu 'Mumwe ane Zvese Zvekutenda' zvinoratidza Chandler achireurura rudo rwake mushure mekuona Monica akapfeka turkey mumusoro wake.
'Unotaridzika kwazvo, ndinokuda.'
Kunyangwe Chandler achiramba kuzvitaura, Monica akazvinzwa zvinonzwika uye zvakajeka sevamwe vese fan 'Shamwari'.
Uyezve verenga: Epamusoro mashanu Shamwari 'zvikamu zvekutarisazve pamberi peiyo Reunion yakakosha
# 5 - Uyo ane hembe nyowani yaJoey (Shamwari mwaka 5 chikamu 17)
Zvakadaro zvaJoey achigogodza paRoss 'furati (Mufananidzo naWarner Bros.)
zvinhu gumi zvekuita kana iwe uchinetseka
Ichi chiitiko chakatsaurirwa kuna Joey kutsvaga 'musikana anopisa' anogara muRoss 'chivakwa chemba. Asi rombo raJoey rinomuisa mufurati raRoss. Chiitiko chinoratidza Joey akapfeka bhuruu-kumusoro shati paanogogodza mukoridho.
Asi iyo hembe zvinoshamisa inoshanduka kuita nhema zip-kumusoro kumusoro panguva iyo Ross anovhura musuwo.
Disiki : Chinyorwa ichi chakavakirwa pamaonero emunyori.
Uyezve verenga: Aizove nevana gumi: David Schwimmer anoburitsa pachena izvo Joey Tribbiani angave ari kuita mu2021 pamberi peShamwari Reunion
5 Zvinhu Kubva Kare Zvakare Zvinokanganisa Ramangwana Rako (Kana Iwe Uchivarega Ivo)
5 yezvinhu zvehushingi zvakaitwa neWWE Superstars
5 Biggest Brock Lesnar nguva dzaungangodaro iwe waisaziva dzaive dzisina kunyorwa
Chii chinonzi Locus Of Control? Uye Zvemukati Kana Zvekunze Zviri Nani?
Kana Rudo Rwako Rwakafa, Usazviudze Iwe Izvi zvisere zvisere
Nanci Griffith akafa sei? Zvese nezvemugadziri anokunda mubairo weGrammy paanofa pa68
Wedzera Pfungwa Dzako Kuwedzera Nekuita Izvi Zvitanhatu Zvinhu Zvakareruka
5 Superstars vaive sekondi imwe kubva pakuva WWE Champion
Lee Williams wemweya QC akafa riini? Makadhi anodururwa apo muimbi wevhangeri anopfuura ave nemakore makumi manomwe nemashanu
Iye Undertaker anoratidza zvaakanyorera Edge mushure mekutarisa 'The Greatest Wrestling Match Ever'
Vhidhiyo: 8 vakomana AJ Lee vakatsvoda muWWE kusvika zvino
Chikamu chevakadzi: Evolution yevakadzi kurwa muWWE pamusoro pemakore
kutaura nemurume wangu nezvematambudziko edu
akandisiya kune mumwe mukadzi achadzoka here
kutaura sei kana mumwe mukadzi ane godo newe
john cena nedombo
maitiro ekupindura pakubiridzira kupomera
vince mcmahon wakadzingwa gif